नेपाली नागरिकता नभएका १० चर्चित सेलिब्रेटी (भिडियोसहित) – Etajakhabar
नेपाली नागरिकता नभएका १० चर्चित सेलिब्रेटी (भिडियोसहित)
‘तपाईंको अन्तिम इच्छा के छ ?’ यस प्रश्नको जवाफमा अरुले के भन्छन् कुन्नी, तर क्यानसरसँग अन्तिम युद्ध लडिरहेका बरिष्ठ द्धन्द निर्देशक तथा अभिनेता गोपाल भुटानीले गहभरी आँशु पार्दै भनेका थिए – ‘मेरो अन्तिम इच्छा नेपाली नागरिक भएर मर्न पाउँ भन्ने छ ।’
सुदुर पूर्वको जिल्ला इलाम पूर्खेउलीथलो भएका गोपाल भुटानीको फिल्मी जीवन बलिउडवाट सुरु भएको हो । ४१ बर्षअघि निर्मित नेपाली फिल्म जीवनरेखामा काम गर्न बलिउडकर्मीको रुपमा नेपाल आएपछि भुटानीलाई सवैले उतैको सम्झिए ।
भुटानीले पनि सुरुका दिनमा बलिउडवाट आएको भन्ने कुरामा गौरव गरेको तत्कालीन फिल्मकर्मीहरु वताउँछन् । जतिवेला भुटानीलाई नेपाली नागरिक नभएकोमा घोच्न थाल्यो, त्यतिवेलासम्म ढिलो भइसकेको थियो । नेपालमा उनी बलिउडका हुन् भन्ने कुरा स्थापित भइसकेको थियो ।
उनले नखोजेका होइनन् । तर चाहेर पनि विविध कारणले गोपालले बंशजको आधार प्रमाण जुटाउन सकेनन् । सायद यही कारण उनलाई नागरिकता दिन नेपाल सरकारले कहिल्यै मन लगाएन । उनको इच्छा सुनेन । अधुरै इच्छा बोकेर गोपाल भुटानी अनागरिक मृत्युबरण गर्न बाध्य भए ।
नेपाली हुँदा हुँदै र नागरिकताको इच्छा राख्दा राख्दैपनि नपाईकन मृत्यु हुने गोपाल भुटानी एकमात्र सेलिब्रेटी हुन् । तर अरु धेरै सेलिब्रेटीहरु पनि छन् जो नेपाली नागरिकता पाउनवाट बञ्चित छन् । अर्थात नेपाली नागरिकता नभएका सेलिब्रेटीहरुको कथा आजको हाम्रो रिपोर्ट हो ।
कलाकारिता देखाउन नागरिकताको आवश्यकता पर्दैन । नेपाली फिल्मकर्मी बलिउडमा, बलिउडका फिल्मकर्मी हलिउडमा र जहाँसुकैका फिल्मकर्मी जुनसुकै फिल्मी उद्योगमा कार्यरत रहेका छन् । तर पनि सूचना दिने उद्धेश्यले अनागरिक नेपाली सेलिब्रेटीहरुको परिचय प्रस्तुत गर्दैछौं ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २५, २०७५ समय: १५:११:१५
गायिका टिका सानुको खुलासा: शक्तिले गर्भवती बनाए (हेर्नुहोस)
पुर्व पोनस्टार सन्नी लियोनी भन्छिन ‘म पोर्न भिडियो हटाउन चाहन्छु ‘
अभिनेत्री जाह्नवी कपूर निस्किइन् नरेन्द्र मोदीको प्रचारमा , मोदीको प्रचार गरिएको ट्वीट बन्यो भाइरल , यस्तो छ खास कुरा
अक्षयको ‘केसरी’ र रणवीको ‘गली ब्वाय’ लाई पछि पार्दै वरुण र आलिया अभिनित फिल्म कलंकले बनायो नयाँ रेकर्ड , कति कमायो त ?
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बायोपिकको ट्रेलर एकाएक किन यूट्युबबाट हरायो ?
दुर्गेश थापालाई केटीहरुले तानेरै हैरान, गुल्मी पुगेर उधुम मच्चाए (भिडियो)
यौन उत्पिडनमा परेको बारे प्रियंका चोपडाले गरिन् यस्तो खुलासा